Wazi njani ukuba umntu othile ukhuphele iTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Wazi njani ukuba umntu ukhuphele iTelegram?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 1005
Inethiwekhi igcwele ubuqhetseba esinokuthi sibusebenzise ukufumana izinto ezininzi, umzekelo njenge Yazi xa omnye wabafowunelwa bethu ethathe isigqibo sokukhupha usetyenziso lweTelegram kwifowuni yakho. Siyakumema ukuba uhlale nathi ukuze wazi inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele.
Kukho iindlela zokufumanisa ukuba omnye wabahlobo bethu ukhuphe ntoni isicelo esithandwayo sokuthumela imiyalezo kwifowuni yakho ephathekayo. Kuhlala kubalulekile ukwazi ukuba olu hlobo lolwazi lukhuselekile xa uthumela umyalezo kuloo mntu.
Ungafumanisa ukuba ngaba umntu othile uye wakhupha usetyenziso
Ngaba ukhathele kukubhalela omnye wabafowunelwa bakho uze ungafumani mpendulo? Ngokunokwenzeka loo mntu uyikhuphile usetyenziso lweTelegram kwifowuni yakhe. Nangona eli lelinye lamaqonga alungileyo namhlanje apho ukuthumela nokuthumela imiyalezo, abaninzi bagqiba kwelokuba bayisuse kwi-Smartphone yabo
Kukho abo bathatha isigqibo sokukhupha usetyenziso ngenxa yokunqongophala kwesithuba kwizixhobo zabo, ngelixa abanye besicima nje kuba singadibani nokulindelweyo kwabo. Nokuba siyintoni na isizathu, into ebalulekileyo yile Yazi ukuba kukho iindlela zokufumanisa ukuba xa omnye wabafowunelwa bethu ekhuphe usetyenziso.
Amanyathelo okwazi xa isicelo sikhutshiwe
Abasebenzisi benethiwekhi yemiyalezo eyaziwayo yeTelegram Banendlela ezininzi zokufumanisa ukuba ngaba bakho abafowunelwa bakho abagqibe ekubeni bayikhuphe usetyenziso kwiifowuni zabo.
Enye yeendlela ezilula zokufumanisa ukuba ukuthumela umyalezo ngqo kulowo unxibelelana naye. Ukuba iiyure ziyadlula kwaye umntu akafumani myalezo, kunokwenzeka ukuba basikhiphe isicelo.
Wazi njani ukuba umnxibelelwano wethu ufumene umyalezo othunyelweyo? Kulula kakhulu ukufumanisa. Kuya kufuneka uyazi kuphela uphawu lokutshekisha oluvela kwincoko xa sele sithumele ulwazi oluthile. Ukuba umyalezo ukhatshwa zizimbo ezimbini, oko kuthetha ukuba umntu sele ewufumene umyalezo wethu.
Jonga umfanekiso wakhe weprofayile
Kukho enye indlela yokwazi ukuba umntu othile kunxibelelwano lwethu uyekile ukusebenzisa isicelo seTelegram. Ungazama ukujonga iinkcukacha zakho, ngakumbi umfanekiso weprofayili. Ukuba uqaphela ukuba umntu akasenayo ifoto echazayo, mhlawumbi bayekile ukusebenzisa iqonga.
Intloko kuluhlu lwabafowunelwa bakho
¿Unomfanekiso weprofayili osebenzayo? Ke usenaso isicelo esifakwe kwifowuni yakho.
Ngaba iindlela ezimbini ezidlulileyo azikusebenzelanga? Akukho sidingo sokukhathazeka. Kukho enye indlela yokwazi ukuba umntu uyekile ukusebenzisa isicelo seTelegram. Unokuzama ukufumanisa Lwagqibela nini uqhagamshelo lwakho ngaphakathi kweqonga.
Cinezela ngaphezulu kwemigca emithathu ethe tyaba evele phezulu ngasekhohlo kwesikrini
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Ifowuni"
Kwiskrini uluhlu luza kuvela nabo bonke abafowunelwa bongezwe kwiapp.
Nika ingqalelo kulwazi oluvela phantsi konxibelelwano ngalunye. Apho iyaboniswa xa yayinjalo uqhagamshelo lwakho lokugqibela. Ukuba kutshanje, kungenxa yokuba umntu uyaqhubeka nokusebenzisa usetyenziso.
1 Ungafumanisa ukuba ngaba umntu othile uye wakhupha usetyenziso
2 Amanyathelo okwazi xa isicelo sikhutshiwe
3 Jonga umfanekiso wakhe weprofayile
4 Unxibelelwano lokugqibela
Uzibona njani iintsingiselo zehlabathi kwi-twitter?
Ndifuna ukwazi idilesi ye-imeyile yeakhawunti ye-Facebook